OPPO Reno: Nkọwapụta, ọnụahịa na ụlọ ọrụ gọọmentị | Gam akporosis
OPPO Reno: smartphonedị ama ọhụụ ọhụrụ ahụ bụ nke gọọmentị
Izu ndị a enweela ezu asịrị banyere nso nke OPPO Reno. Akara ndị China nwere debara aha ụdị dị iche iche na Europe. Ngosipụta gọọmentị na China emere na Eprel 10. Ọ bụ ezie na ọ ga-abụ na njedebe nke ọnwa a mgbe ngosi nke otu ihe na Europe. Ma anyị amaraworị ihe ika ahụ na-ahapụ anyị na nke a, ebe ọ bụ na e gosipụtara ya na China.
Yabụ nke a OPPO Reno bụ onye ọrụ gọọmentị. A smartphone nke ika ahụ juru ọtụtụ anya. Ebe ọ bụ na anyị enweghị ọkwa ma ọ bụ oghere na ihuenyo ahụ. Onweghi igwefoto eji na-eji eme ihe. Mana anyị na-ahụ ụdị fin, nke igwefoto n'ihu ekwentị na-ezo.
Imewe bụ ikekwe akụkụ na-adọta mmasị kachasị. Ebe ọ bụ na ha na-etinye nzọ na ihe dị iche na ihe anyị na-ahụ n'ụlọ ahịa taa. Yabụ na ọ ga - ewepụta mmasị site na ndị ahịa. Na ọkwa teknụzụ, ama ama a ruru ọnụ ọgụgụ dị elu n'etiti gam akporo.
1 Nkọwapụta OPPO Reno
Nkọwapụta OPPO Reno
Nke a OPPO Reno dị ka a-akpali nnọọ mmasị ama na a ahịa nke. Ntughari mgbanwe, ezigbo nkọwa zuru ezu n'ozuzu ya, na-elebara anya na ese foto, na mgbakwunye na ezigbo uru maka ego. Ọ na-agbaso ọtụtụ akụkụ nke mkpa ndị ahịa. Ndị a bụ nkọwa ya:
Ihuenyo: 6,4-inch AMOLED nwere mkpebi 2340 x 1080 (402 dpi) na nchedo Corning Gorilla Glass 6
Nhazi: Snapdragon 710
Rear igwefoto: Sony IMX586 48 MP nwere oghere f / 1.7 + 5 MP nwere oghere f / 2.4
Batrị: 3765 mAh na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa VOOC Flash Charging 3.0
Usoro njikwa: A gam akporo 9 achịcha na agba OS 6
Njikọ: Dual SIM, Bluetooth 5.0, 4G / LTE, WiFi 802.11 a / c, USB-C, minijack
ndị ọzọ: Mkpịsị aka mmetụta na ihuenyo, ihu ude, NFC
Akụkụ: 156,6 x 74,3 x 9 mm
OPPO choro inye ndi ohuru ihe ohuru. N'ụzọ nke a, anyị nwere ike ịhụ na n'ihu igwefoto na ekwentị ga-emeghe dị ka nke a, na akuku. Kama ịkụ nzọ na usoro ọdịnala, dị ka anyị na-ahụ na ụdị ndị ọzọ, ụlọ ọrụ ahụ na-achọ inye ihe ọhụrụ na iche. N'ihi ya, a ghaghị iji nzọ a kpọrọ ihe. Igwefoto n'ihu 16 MP nke anyị hụrụ na ngwaọrụ ahụ.
Igwefoto azụ dị abụọ na nke a. N'adịghị ka ụdị ndị ọzọ dị n'etiti, ebe anyị na-ahụrịrị ese foto atọ, OPPO Reno a na-ahapụ anyị na ihe mmetụta abụọ. Mgbe isi ihe mmetụta bụ 586 MP Sony MIX48. Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma anyị na-ahụ n'ahịa taa. Yabụ foto ga-abụ ebe siri ike na ekwentị.
N'ihi na processor e ji mee ihe Snapdragon 710, nke bu ihe nkenke nhazi n’ime ihe di nkpa di elu na gam akporo. Ọ ka na-adị otu a n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ụlọ ọrụ amalitelarị onye nọchiri ya. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ na-emezu na filtration nke na-adịbeghị anya, ebe a hụrụ ụdị ekwentị na ihe nhazi a. Yana processor anyi nwere uzo abuo nke RAM na nchekwa. Ihe bụ ihe ọzọ, abịa na batrị 3.765 mAh, nke na-ekwe nkwa nnwere onwe dị mma. Karịsịa na njikọta na nhazi. Enwere nkwado maka ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa nke ika a na OPPO Reno
Ruo ugbu a nke a bụ ihe ngosi ya na China. Ná ngwụsị nke ọnwa a, anyị ga-enwe ike izute ndị a OPPO Reno na Europe, na mmemme a tụrụ anya na a ga-eme na Zurich. Ya mere, anyị nwere ike ịhụ ọnụahịa na ụbọchị mmalite nke oke a na Europe. Ọ bụ ezie na n'oge a anyị nwere ọnụahịa ha na China, nke na-enye anyị ohere inweta echiche nke ihe ị ga-atụ anya na ekwentị.
Enwere ọtụtụ nsụgharị dabere na RAM na nchekwa gị, dị ka anyị hụworo. Ahịa na nsụgharị nke OPPO Reno a ga - enwe:
6/128 GB: 2.999 yuan, ihe dị ka euro 397 ịgbanwe
6/256 GB: 3.299 yuan, ihe dị ka euro 435 ịgbanwe
8/256 GB: 3.599 yuan, ihe dị ka euro 475 ịgbanwe
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OPPO Reno: smartphonedị ama ọhụụ ọhụrụ ahụ bụ nke gọọmentị
OPPO Reno 5G: Akara ohuru ohuru a
Ọkara nke ndị ọrụ na-ahọrọ Pixel 3 sitere na Samsung